Warar Dheeraad ah oo ku Saabsan Dagaal aan Shalay Sheegnay in uu ka Dhacay Gabalka Qoraxeey – Rasaasa News
Warar Dheeraad ah oo ku Saabsan Dagaal aan Shalay Sheegnay in uu ka Dhacay Gabalka Qoraxeey
Shalay waxaanu soo daabacnay dagaal culus oo ka dhacay Qabridahare, dagaalkaas oo aanu idiinku sheegnay in uu dhaxmaray mid ka mid ah Jabhadaha ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya iyo Ciidanka dawlad degaanka Somalida Ogadeeniya.
Hadaba, warkaas oo sax ah, ayaanu hada helay faahfaahintiisa. Ma jiraan wax dagaal ah oo dhacay, laakiin waxaa miino aan wax dhigay laga warhaynin ay la kacday baabuur ay saaraayeen Ciidanka Booliska cusub. Baabuurka oo ka baxay magaalada Qabridahare ayaa waxaa u badnaa ciidanka saaraa ciidamada laga qoray gabalka Qoraxeey, dadka dhintay ayey tiradoodu kor u dhaafaysaa 38 ruux, dhaawaca ayaa la sheegayaa in uu yahay tiro intaas la eg.
Kolkii uu bilowday khilaafka ururka ONLF, ayaa waxaa uu khilaafku saameeyey ciidanka ururka ONLF, kolkaas oo qaar badan oo ka mid ahaan jiray ay isu dhiibeen Itobiya iyaga oo bixiyey sirtii ururka ONLF. Waxaa ka faa,iidaystay khilaafka ururka ONLF xukuumada Itobiya, waxaana isla markiiba dib loo shaqaaleeyey kumanaan ka mid ah dhalinyaradii ka soo carartay ururka ONLF oo dib tababar loo galiyey, waxaana loo bixiyey Booliska Cusub [New Police] ee Dawlada Degaanka Somalida [DDS].
Hadaba, ciidamadan Booliska Cusub ayaa waxa uu dhibaato xoog leh u gaystay ururka ONLF iyo taageerayaalkeedaba, in kasta oo xiligaas ayna dadweynuhu taageero siinin Booliska Cusub oo ay u arkayeen in ay yihiin dhuuni raacyo. Waxaa ay heleen taageerada u badan Booliska Cusub, markii uu ururka ONLF oo kolkii hore khilaaf af ahi ka dhaxeeyey ay dhexmartay colaad xabadeed waxaana la dilay hogaamiye ka mid ahaa garbihii ururka ONLF, Dr. Dolal. Xiligaa wixii ka dambeeyey waxaa soo baxday gudaha Ogadeeniya gabalo badan oo ka mid in ay kalsoonidii kala noqdeen ururka ONLF, loona leexiyo taageerada Booliska Cusub.
Waxaa kale oo ay colaad sokeeye oo uur iyo afba ah dhexmartay beelaha kala taageera labada garab ee ururka ONLF.
Si kastaba ha haatee, waxaa si aan qarsoodi ahayn u muuqata in halgankii ay ku hiranaysay ummada Somalida Ogadeeniya uu jilbaha dhulka ugu dhuftay ninka la yidhaahdo Jwxo-shiil iyo beeshiisa oo iyagu khalad iyo saxba ku garab taagan.
Garabka Jwxo-shiil, ayaa Waxay baryahan dambe xooga saareen in ay la dagaalamaan dadka ku nool gabalo gaar ah iyaga gubaya gaadiidka. Bishii hore dhexdeedii ayey ahayd kolkii ay magaalada Qabridahare niman ay isku hayb yihiin Jwxo-shiil ka afduubeen laba nin oo Odayaal ah, kuwaas oo kolkii dambe ay soo daayeen markii ay geeyeen meel u dhaw Magaalada Dhagaxbuur. Labadan nin oo caan ka ah Qabridahare ayaa la kala yidhaahdaa Faarax gaydh, Ismaaciil Khaliif.
Dadkan miinada ku dhintay ayaa kuligood ah Somali, mana ah wax lagu farxi karo, maadaama ay yihiin dadkii wadanka u dhashay, miinadan ayaa ah mid aan cadow loo dhigin balse loo dhigay cid kasta oo jidka marta in ay ku dhimato.
Kolba hadii ay arintii xornimodoonku halkaas marayso, waxaa ay xaalada Ogadeeniya noqon kartaa colaadii qoyska ee ka dhacday dalka Neapal.
Ilaahow Halgankanaga ha ka yeelin Doqon dabqaaday.
Waxaana tacsi u diraynaa wiilasha ku dhintay alhuumooyinka ka taagan dhulka Somalida Ogadeeniya, eheladoodiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo
Dagaal Culus Habeenkii Xalay ka Qarxay Agagaarka Qabridahare.